कम्प्यूटरमा ल्यापटप जडान कसरी गर्ने?
घर गृह आपूर्तिहरू
आज, घरको कम्प्युटरमा कसैलाई चकित छैन। यसको विपरीत, यदि यो अनुपस्थित छ, यसले भ्रम उत्पन्न गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ, यसको अतिरिक्त, त्यहाँ अर्को यन्त्र हो - एक ल्याप्टप। कहिलेकाहीँ तपाईंले ती जानकारीहरू छिटो र सजिलै संग जानकारी वा अन्य उद्देश्यका लागि टाउको जोड्न आवश्यक छ। कम्प्यूटरमा ल्यापटप जडान गर्न र यसलाई गर्ने कसरी जडान गर्न सम्भव छ, हामीलाई तल कुरा गरौं।
कम्प्यूटर विकल्पहरूमा एक ल्यापटप कसरी जडान गर्ने?
यदि त्यहाँ कुनै सञ्जाल यन्त्रहरू छैनन् भने, तपाईं अझै पनि दुई यन्त्रहरू बीच सञ्चार व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नका लागि, कम से कम2तरिकाहरू छन्: wi-fi र usb-cable मार्फत।
पहिलो, हामी wi fi मार्फत कम्प्युटरमा कसरी ल्याप्टप जडान गर्ने भनेर हेर्छौं। जडानको यो तरिका दुई ल्याप्टपहरूका लागि उपयुक्त छ, जस्तै आधुनिक मोडहरूमा wi-fi मोड्युल प्याकेजमा समावेश छ। यदि तपाईंलाई एक ल्याप्टप र डेस्कटप कम्प्यूटर जडान गर्न आवश्यक छ भने तपाईले wi-fi एडाप्टर आवश्यक पर्दछ।
जब एडाप्टर जोडिएको छ, तपाईंलाई ड्राइभहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ, त्यसपछि स्वचालित यन्त्रहरू IPv4 सेटिङहरू दुवै यन्त्रहरूमा राख्नुहोस्। गर्नका लागि, तपाईंलाई "नियन्त्रण कक्ष" - "सञ्जाल र साझेदारी केन्द्र" प्रविष्टि गर्न आवश्यक छ - "एडाप्टर सेटिङ परिवर्तन गर्दै"। ड्रप-डाउन "रन" सञ्झ्याल प्रकार "ncpa.cpl" मा।
तपाईंलाई सञ्जाल जडानमा लिइनेछ, जहाँ तपाइँ "वायरलेस नेटवर्क" प्रतिमा फेला पार्नुहुन्छ र दायाँ माउस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
ड्रप-डाउन सन्दर्भ मेनुमा "गुण" वस्तु चयन गर्नुहोस्, "ताररहित सञ्जाल" गुण सञ्झ्याल खुल्नेछ। "एन्टरनेट प्रोटोकल संस्करण4(TPC / IPv4)" मा डबल क्लिक गर्नुहोस् र बाकसलाई "स्वचालित रूपमा IP ठेगाना प्राप्त गर्नुहोस्" र "स्वचालित रूपमा DNS सर्भर ठेगाना ठेगाना" प्राप्त गर्नुहोस्।
हामी कम्प्यूटरमा एक ताररहित सञ्जाल कमांड लाइन मार्फत प्रशासक अधिकारको साथ बनाउँछौं। यो गर्नका लागि "सुरू" आदेश "कमांड प्रम्प्ट" आदेश टाइप गर्नुहोस् र प्रदर्शित आइकनमा दायाँ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
हामी ड्रप-डाउन मेनुमा "चयन गर्नुहोस् प्रशासक चलाउनुहोस्" मा छान्नुहोस्। आदेश प्रम्प्टमा आदेशहरू टाइप गर्नुहोस् "ताररहित सञ्जाल सिर्जना गर्नुहोस्।"
जब ताररहित सञ्जाल सिर्जना गरीएको छ र पहिले नै सुरू भयो, त्यसपछि ल्याप्टप "वायरलेस नेटवर्क" मा जानुहोस् र "हाई" ट्याप गरी सुरक्षा कुञ्जी प्रविष्ट गरेर नेटवर्कमा यन्त्रहरू खोजेर यसलाई जडान गर्नुहोस्।
अब हामी कसरी कम्प्युटरबाट ल्यापटपमा कम्प्युटर जडान गर्न जान्छौं। विधि धेरै सुविधाजनक छैन, किनकी यसको लागि सामान्य USB-केबल उपयुक्त छैन। तपाईले एक विशेष केबल किन्नु पर्दछ जसले तपाईंलाई USB मार्फत स्थानीय सञ्जाल सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
जडान पछि, विन्डोजले तपाईंलाई चालक स्थापना गर्न आवश्यक हुनेछ। यसलाई स्थापना पछि, तपाईंले सञ्जाल जडानहरूमा भर्चुअल नेटवर्क एडेप्टरहरू देख्नुहुनेछ। तपाईले आईपी ठेगानाहरू दर्ता गर्न आवश्यक छ।
पहिलो, भर्चुअल एडेप्टरमा राइट-क्लिक गर्नुहोस्, "गुण" वस्तु चयन गर्नुहोस्।
अर्को, "इन्टरनेट प्रोटोकल TPC / IPv4" चयन गर्नुहोस् र बाँया बटनमा दुई पटक थिच्नुहोस्।
हामी दुवै आईपी ठेगानाहरू दुवै उपकरणहरूमा दर्ता गर्छौं र सिर्जना गरिएको सञ्जाल प्रयोग गर्दछौं।
धेरै मानिसहरू कम्प्युटर र ल्याप्टप र एक टिभी - पाठ्यक्रमको माध्यमबाट HDMI मार्फत कसरी सञ्जाल जडान गर्न रूचि राख्छन्। तपाईं धेरै तरिकामा जान सक्नुहुन्छ:
HDMI to hdmi - just पीसी / ल्याप्टप र टिभिमा सम्बन्धित जडानकर्तालाई केबल जोड्नुहोस्;
dvi-I लाई hdmi मा - थप अडियो जडान आवाश्यक छ।
दुवै अवस्थामा, तपाइँ निम्नानुसार अगाडि बढ्नु पर्छ: पहिला पीसी वा ल्यापटप बिच्छेदन गर्नुहोस्, यसलाई HDMI केबल जडान गर्नुहोस्, पहिले टिभीमा स्विच गर्नुहोस्, SOURCE मेनुमा HDMI जडान प्रकार फेला पार्नुहोस्, त्यसपछि ल्यापटप खोल्नुहोस्। कहिलेकाहीँ यो छवि अझै पीसी वा ल्यापटपबाट टिभिमा स्विच गर्न आवश्यक छ। ल्याप्टपमा, यसका लागि Fn + F8 कुञ्जी संयोजन प्रदान गरिएको छ।
यी दुइटा कुञ्जीहरूलाई तल राखेर, तपाइँले ल्यापटपबाट टिभीमा TV, फिर्ता TV बाट ल्यापटपमा स्विच गर्न सक्नुहुनेछ वा छविलाई सिधा दुवै उपकरणहरूमा पठाउनुहोस्।
Multivarka-pressure cooker - कसलाई छनौट गर्ने?
वाशिंग मशीन सक्रियकर्ता प्रकार
फोनको लागि होल्डर
केक स्ट्यान्ड घुमाउँदै
कुन ब्लेंडर छनौट गर्न राम्रो छ - गृहिणीहरूलाई राम्रो सल्लाह
भान्साको लागि उपयोगी ग्याजेटहरू
ताररहित श्रृंखला देख्यो
सिङ्कको लागि Chrome siphon
हामीलाई हावा मृगफायर चाहिन्छ?
तपाईं छुट्टीमा जाने बेला फूलहरू कसरी पानी जोगाउनुहुन्छ?
सर्दियामा इंद्रधनुष एक चिन्ह हो
2014 को शैली
निराश चार्ली शेनलाई आफ्ना आमाबाबुलाई सघाउन बाध्य भयो
पोदशाेरेका साथ रुले, ओवनमा पकाएको
माइक्रोवेव ओवन कसरी प्रयोग गर्ने?
एक जन्मदिन को लागि एक बच्चाहरु को तालिका को कसरि सजाने को लागी?
बोझो जोडहरूको उपचार
हेमी क्लामले टम कलिट्जसँग बाहिरी बास्केटबललाई सजिलो बनायो
Ekaterina Usmanova: प्रशिक्षण सत्र
महिनामा मोन्टनेग्रोमा मौसम
एक निजी घर को लागि स्ट्रीट दरवाजे
प्याजको साथ प्याज रिंग्स
बालबालिकाका सामानहरू प्रदायक - सुन्दर बालबालिकाको इन्टरनेट चयन
एनएनसीको साथ आहार
ओप्टिक तंत्रिका परमाणु
Gavin Rossdale संग एलिन Nordegren भेटिन्छ
प्रेम, खुशी र भाग्य को लक्षण
घरहरुको मुखौटा को प्रकार